R.W Solberg oo ka hadashay xaalada cusub ee Corona. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub R.W Solberg oo ka hadashay xaalada cusub ee Corona.
R.W Solberg oo ka hadashay xaalada cusub ee Corona.
Reysulwasaaraha dalkan Norway Erna Solberg oo maanta shir jaraa´id la qabatay wasiirkeeda caafimaadka, ayaa sheegtay in xaalada Norway ee xanuunka Corona ay tahay mid aan la hubin sida ay noqon doonto, maadaama ay soo kordheyso tirada dadka laga helay xanuunka Corona. Waxeyna sheegtay in dowladu aysan wixii hada ka danbeeyo dabcin karin xeerarkii hore ee lagu xakameynayay xanuunka Corona, balse taas badalkeeda ay dhici karto in lasoo rogo qaar kamid ah xeerarkii iyo shuruucdii adkeyd ee lagu xakameynayay faafitaanka xanuunka Corona.
Reysulwasaaraha ayaa sheegtay in dowlada iyo hey´addaha caafimaadka heer gobolka iyo heer degmo ay si hoose oo saacad ah ula socdaan xaaladaha soo kordhayo ee xanuunka Corona, ayna mar walba qaadayaan talaabada ku haboon xiliga iyo xaalada markaas la joogo. Waxeyna sheegtay in maalmaha soo socdo ay yihiin kuwa kala cadeyn doono nooca go´aan ee dowlada ay ka qaadaneyso xaalada soo korortay.
Erna Solberg ayaa shaacisay in hadii xaaladu ay sidan kusii socoto, ay dowladu dib usoo celin doonto qaar kamid ah xeerarkii xakameynta xanuunka Corona. Waxeyna tusaale usoo qaadatay in dowladu ay dhimi doono tirada dadka ah ee kulmi kara, ayna dad badan ku qasbi doonto inay guryaha ka shaqeeyaan, ayna yareeyaan adeegsiga gaadiidka dadweynaha. Sidoo kalena dowladu ay dadka kala talin doonto inay u safraan degmooyinka uu xanuunku ku faafay, halka jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada sare ay casharada qaab digital(Fogaan arag ah) ku bixi doonaan).
Xigasho/kilde: Erna Solberg varsler mulige innstramninger: Vi står på svært utrygg grunn.
Previous articleFrp oo Trump u sharaxay bilada Nabadda aduunka (Nobel Peace Prize)
Next articleAabe iyo wiilkiisa oo loo xukumay isku dayga dilka wiil ay gabadhiisu guursatay